Kume yonke into abasebenzi bamasipala befuna amaholo | News24
Kume yonke into abasebenzi bamasipala befuna amaholo
Bagcwale imigwaqo maphakathi nedolobha ngeledlule abasebenzi bamasipala woMsunduzi bekhala ngokuthi abaholile.PHOTO: nokuthula khanyile
IGCINE ingenile imiholo yabasebenzi baMasipala wasoMsunduzi abagasele e-City Hall ngoLwesithathu olwedlule kwancane indawo bethukuthele begane unwabu.
Labasebenzi babhikishe bavala umgwaqo uLangalibalele ngezimoto zabo zokusebenza befuna ukwazi ukuthi kungani imiholo yabo ingangenanga ngomhla ka-24 njengenhlalayenza.
Abasebenzi bathi bayitholile imiyalezo yomqhafazo ebithi imiholo yabo ingenile kodwa kuthe uma befika emabhange ‘bashawa amabhomu’ kwathiwa imali ayikho.
Iziphathimandla zikamasipala zibhekane nengcindezi yokuthi zichazele abasebenzi cishe abangama-70%, imbangela yokungaholi kwabo.
Obambe njenge menenja kamasipala ekhuluma nabasebenzi uMnuz Sizwe Hadebe uthe inkinga ibesebhange abasebenzisana nalo u-First National Bank (FNB), kutholakale ukuthi kube nokuphazamiseka kwezobu chwepheshe kwa-FNB okudale ukuthi kuphazamiseke izinhlelo zokuholela abantu.
Omunye wabasebenzi okhulume ne-Maritzburg Echo uthe okubadina kakhulu njengabasebenzi ukuthi umkhandlu ubusanda kwenza umcimbi owubukhazikhazi wenzela uDkt Nkosazana Dlamini-Zuma emavikini edlule.
“Sifuna ukwazi ukuthi umkhandlu unayo yini imali ngoba izimpukane eziluhlaza zithi ngoMsombuluko bekunomhlangano emahhovisi lesifunda ka-ANC kudingidwa udaba lwezimali nathi sifuna ukwazi ukuthi kuqhubekani. Bangawenza kanjani umcimbi kaDlamini-Zuma ibe ingekho imali yokusiholela?”
Lo msebenzi uthe bafuna nokwazi ukuthi umbiko kamcwaningi mabhuku utheni ngodaba lwezezimali kulo mkhandlu.
“Umkhandlu usanda kuthenga izimoto zikanokusho uthengela imeya nezinye izikhulu, izimoto zabo ezindala zibe zisesimweni esigculisayo. Zithe uma zifika nalezi ezintsha bathi bafuna eziwuhlobo olusha kwaphinde kwakhishwa enye imali futhi. Sekuyasicacela ukuthi baxosha uNkosi ngoba befuna kudliwe izimali zomkhandlu.”
Labasebenzi bathi bekuqala ngqa ukuthi bangaholi futhi lokhu kubadumaze kakhulu.
“Okusixakayo ukuthi uDkt Ray Ngcobo usanda kuzwakala kuMgungundlovu FM ethi zikhona izimali ngeke uwe umkhandlu. Siyakhala kakhulu ngobuholi bukaNjilo ngoba kwamanje akekho la useNquthu uyokhankasela i-ANC, ushiye umonakalo kumasipala wakhe.” Labasebenzi babhikishe ngaphandle kwaseCity Hall bachitha udoti emgaqweni baya nase A.S. Chetty Building lapho befike nakhona bashisa udoti bajikijela namaqanda. Ngesikhathi kwenzeka lokhu umgwaqo uChurch Street ubuvaliwe, izimoto namatekisi zaphoqeleka ukuthi zisebenzise eminye imigwaqo.
Labasebenzi bebesabisa ngokuthi angeke kusebenzeke edolobheni laseMgungundlovu uma amaholo abo engangeni.
“Akuzusebenzeka kuleli dolobha kube siyaholelwa. Siyabadabukela abangenamanzi, abanqunyelwe amapayipi, abangenagesi nabaqhunyelwe izitamukoko, bazohlala kanjalo ngoba ngeke sisebenze,” kusho omunye umsebenzi.
Bathe ukungaholi kwabo kubafake enkingeni njengoba benezikweleti.
“Sinezikweleti ezidonsa izimali emabhange njalo ngenyanga, sikhokhela izindlu, ubani ozokhipha enye imali yokukhokhela ibhange njengoba le mali ingangenanga? Uma umasipala unenkinga yezezimali bekufanele usazise ngoba ngo-April uchief financial officer wasitshela ukuthi umasipala unemali yezinyanga ezintathu.”
UNobhala wenyunyana yabasebenzi bomasipala i-SA Municipal Workers Union (Samwu) uMnuz Sbu Molefe uthe umasipala bekufanele uzihluphe wazise abasebenzi uma kunezinkinga.
“Bekufanele abasebenzi baziswe uma kunenkinga ngemiholo kodwa akekho ozihluphile ngalokho. Okungenani bekungabizwa umhlangano abasebenzi baziswe bese umasipala usho nemizamo onayo ukubhekana nalengqinamba. Sikhathazekile kakhulu ngokuqhubeka kulo mkhandlu.”
Isitatimende esikhishwe umasipala kwabezindaba ngeledlule siphike ukuthi umasipala ubhekene nenkinga yezezimali.
“Umasipala uyaphika ukuthi usenkingeni yezezimali noma usezikweletini. Kunezinkomba zokuthi kube nenkinga yezobuchwepheshe eholele ekutheni abasebenzi baphuze ukuholelwa. Kodwa singakuqinisekisa ukuthi bonke abasebenzi sebeholile.”